नेपालको बेइज्जत !! पार्कमा शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोज्ने सयौं नेपाली युएईको जेलमा -
नेपालको बेइज्जत !! पार्कमा शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोज्ने सयौं नेपाली युएईको जेलमा
युएईको दुवई, सारजाह, आबुधाबी, रसअलखेमा, उम्मलक्विन, फुजेराह र अलऐनमा रहेका आठ वटा जेलमा पुगेर दूतावासका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारको अवस्था र मुद्दाको अध्ययन गरेको थियो । साथै स्थानीय प्रशासनका उच्च अधिकारी र ती नेपालीले काम गरेका कम्पनीका प्रतिनिधिसँग समेत भेटघाट गरेको कार्यवाहक राजदूत सागरप्रसाद फुयाँलले बताउनुभयो । भेटमा नेपाली कामदारलाई परेको मुद्दा र त्यसबारे गर्न सकिने समन्वयका लागि दूतावासले चासो देखाएको थियो । यसअघि पनि पटक पटक दूतावासले जेलमा पुगेर त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्दै आएको थियो । तर यहाँ रहेका सबै जेलमा दूतावासका प्रतिनिधि पुगेको यो चौंथो पटक हो । वर्षको दुई पटक सबै जेल पुग्ने योजना अन्तर्गत यो पटक सबै जेलको भ्रमण गरिएको हो ।
कुन जेलमा कति नेपाली
जाँडरक्सीका कारण जेल पर्ने बढे
जेलमा रहेका अधिकांश नेपाली रक्सी पिएर झैझगडा गरेका कारण कारगारमा पुगेका हुन । ९५ जना नेपाली रक्सीकै कारण जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।
अचारमा भाङ, धतुरो र मर्चा, जेलमा पुगेपछि मर्का
हत्या आरोपमा नौ जना नेपाली जेलमा छन् । जेल भ्रमणको क्रममा १६ बर्ष देखी कैदी जीवन बिताइरहेका अमरबहादुर बमदेखि केही महिना पहिले हत्या आरोपमा जेल परेका बुले तामाङ लगायतलाई दूतावासको टोलीले भेटेको थियो । उनीहरुको विषय जटिल भएकाले रिहाइ हुन समय लाग्ने दूतावासले जनाएको छ ।
Sat-Apr-2018, 08:49 am मा प्रकाशित, 257 जनाले हेर्नुभयो
सुर्खेत/ बाट आयो अहिले सम्म कै ठुलो दुखद खबर तपाईंलाई सुन्दा अच्चम लाग्ला
के तपाईलाई निन्द्रा लागिरहेको छैन ? यी उपाय अपनाउनुहोस्